भर्जिन ब्वाय - नेपाल
भर्जिन ब्वायका लेखहरु
चुनावताका कांग्रेसले बोलेको थियो– ‘कम्युनिस्टको सरकार अधिनायकवादी हुन्छ । त्यस्तो शासनमा रुन पनि पाइँदैन ।’ तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको आरोपलाई लोप्पा मात्र खुवाएनन्, रसातालमै डुबाउने भए ।
भर्जिन ब्वाय, श्रावण १०, २०७५
असार लागेपछि चटारो हुन्छ । केही न केही त गर्नैपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारलाई पनि बहुत चटारो छ । कामको फेहरिस्त देखाउने हतारो छ । तर, गर्ने के ? मन्त्री स्वयं खेतबारीमा पस्नु भएन । काठमाडौँको सडकमा कोदाली लिएर हिलो सोहर्ने कुरा पनि आएन ।
भर्जिन ब्वाय, असार २८, २०७५
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई बाल्यकालदेखि चिन्ता थियो कि कम्युनिस्ट तानाशाह आएपछि जनताले रुनसमेत पाउँदैनन् । जनताको आँसु–हाँसोको जिम्मा लिएका जिम्मेवार नेताको भयलाई धेरै राष्ट्रवादीले गैरजिम्मेवार ठहर्‍याए र हाँसोमा उडाइदिए ।
भर्जिन ब्वाय, असार २०, २०७५
भो, डिस्टर्ब नगरौँ
कम्युनिस्ट सरकार ‘समृद्धि’को विश्वकप उचाल्ने ध्याउन्नमा छ । बोलेर मात्र कप हात पार्न सकिन्न । मैदानमै उत्रिन पर्‍यो, ह्याट्रिक गर्नैपर्‍यो । वामपन्थीहरुले झुक्याएर हानेको पहिलो गोल हो– पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि ।
भर्जिन ब्वाय, असार ११, २०७५
प्रचण्ड: मैले तपाईंलाई जति माया गरे पनि तपाईंलाई कुर्सी नफाप्दो रैछ कमरेड ।बादल : अनि, कमरेड, यो कुरा रेड बुकमै लेखिएको छ कि तपाईंको निजी जोखना हो ?
भर्जिन ब्वाय, असार ४, २०७५
पार्टी एकताअघि प्रचण्डले पुल भत्काएर आएको कुरा गर्जेरै बोले । प्रधानमन्त्रीले पनि भर्खरै सगर्व फेरि दोहर्‍याए– ‘नेपाललाई तुइनमुक्त बनाउँछु ।’
भर्जिन ब्वाय, जेष्ठ २८, २०७५